RW Kheyre oo sagootiyay Ciidamo fulinaya howlgal gaar ah – XAMAR POST
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa xerada tababarka ciidamada ee Gen. Goordan booqasho sagootin iyo dardaaran ah ugu tegay ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo diyaariyay howl gallo gaar ah oo Al-Shabaab lagula dagaalamayo.
Xasan Cali Khayre oo ciidamada uga mahad-celiyay naf-hurnimada ay uga qayb qaadanayaan badbaadinta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed, ayaa kula dardaarmay in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaannada loo qorsheeyay in ay ka fuliyaan howl gallada.
Ciidamada uu Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre sagootiyey ayaa qayb ka noqonaya ciidamada ku sugan furimaha ee dagaalkaee Gobolada dalka Soomaaliya qaarkood,kuwaas oo dagaal xoogan kula jira Ururka Al-Shabaab.
Ciidamo horey loogu tababaray Xerada Gen. Gordan ayaa ka qayb qaatay howl gallada ka dhan ah Al-Shabaab oo Ciidamada xoogga dalka Soomaliyeed ay ka fulinayaan deegaannada ay kaga sugan yihiin Gobolada dalka.
-C/Qeybdiid oo shaaciyay cida mas’uulka ka ah caqabadaha heysta Dastuurka